Inhliziyo I-China FK606 Desktop High Speed ​​Round/Taper Bottle Labeller ifektri nabahlinzeki |I-Fineco
Umshini Wokufaka ilebula we-FK606 Desktop High Speed ​​Round/Taper Bottle ulungele ibhodlela le-taper neyindilinga, ithini, ibhakede, ilebula yesiqukathi.
Ukusebenza okulula, isivinini esikhulu, Imishini ithatha indawo encane kakhulu, ingaphatheka kalula futhi ihambe noma nini.
Ukusebenza, Vele uchofoze inkinobho yemodi ezenzakalelayo esikrinini esithintwayo, bese ubeka imikhiqizo ku-conveyor ngamunye ngamunye, akumele wenze okunye ukulebula kuzoqedwa.
Ingalungiswa ekulebuleni ilebula endaweni ethile yebhodlela, ingafinyelela ukumbozwa okugcwele kokulebula komkhiqizo, Uma iqhathaniswa ne-FK606, iyashesha kodwa ayinakho ukulebula kokuma kanye nomsebenzi wokulebula womkhiqizo wangaphambili nangemuva.Kusetshenziswa kakhulu emaphaketheni, ekudleni, ekuphuzweni, kumakhemikhali wansuku zonke, emithini, kwezimonyo nakwezinye izimboni.
I-FK812 Umshini wokulebula wekhadi/isikhwama/ibhokisi elizenzakalelayo
Ukubekezelela Ilebula(mm) ±0.5
Usayizi womkhiqizo wesudi(mm) L:25~380;W(H):20 ~ 130;Kungenziwa ngokwezifiso
Iroli yelebula(mm) I-ID:≥76;OD:≤260
1. Iroli yelebula: Igebe phakathi kwelebula nelebula ngu-2-3mm;
4. Ububanzi bangaphakathi bomgogodla bungama-76mm, kanti ububanzi bangaphandle bungaphansi kuka-300mm, buhlelwe ngomugqa owodwa.
3) Ngemuva kokuthi zonke izingxenye zenziwe, umthwalo wemfanelo wokudlulisa umklami kuMnyango Womhlangano, odinga ukuhlanganisa imishini ngesikhathi.
4)Isibopho esidluliselwe ku-Adjustment Dept ngomshini ohlanganisiwe.Ukuthengisa kuzohlola ukuqhubeka nempendulo kukhasimende.
Okwedlule: I-FK605 Desktop Round/Taper Bottle Positioning Labeller
Olandelayo: I-FK-X801 Umshini wokuvala isikulufa ozenzakalelayo
Umshini wokulebula webhodlela ledeskithophu elinesivinini esikhulu
Umshini Wokulebula Webhodlela Lengilazi
umshini wokulebula webhodlela eliyindilinga elinesivinini esikhulu
umshini wokulebula webhodlela oyindilinga wepulasitiki osheshayo
Umshini Wokulebula Webhodlela Lepulasitiki
umshini wokulebula ibhodlela eliyindilinga lepulasitiki
umshini wokulebula webhodlela eliyindilinga le-tabletop
I-FK605 Desktop Round/Taper Bottle Positioning La...
Ilebula lebhodlela eliyindilinga le-FK807 elizenzakalelayo...